Masuuliyiinta Xisbiyada Mucaaridka ah ee UDUB iyo UCID oo ka hadlay ujeeddada kulan ay la yeesheen Wefti Ingiriiska ka socda | Berberanews.com
Home WARARKA Masuuliyiinta Xisbiyada Mucaaridka ah ee UDUB iyo UCID oo ka hadlay ujeeddada...
Masuuliyiinta Xisbiyada Mucaaridka ah ee UDUB iyo UCID oo ka hadlay ujeeddada kulan ay la yeesheen Wefti Ingiriiska ka socda
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe iyo Garabka Cali Waran-cadde ee Xisbiga UDUB, ayaa ka warramay kulammo gooni-gooni ah oo ay maanta Hudheel Maansoor ee magaalada Hargeysa kula yeesheen Wefti uu hoggaaminayo Safiir ku-xigeenka dawladda Ingiriiska u fadhiya Safaaradda magaalada Addis Ababa ee Itoobiya oo maanta dalka yimi.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo kulankaasi ka dib Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka wadahadleen arrimo la xidhiidha shirka London waxaanu yidhi; “Waxa uu u socday Safiir Ku-xigeenku waa shirka London, waangagaa la shirnay waxa shirkan lagaga hadlayaa arrimaha Budhcad-badeedda,nabadgelyada iyo arrimaha Soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa waxaana ka qeyb galaya dawlad-goboleedyada yar yar ee ay ka mid yihiin Puntland, Gal-mudug, Ehlu-Suna Wal-jamaaca iyo TFG-da (dawladda Soomaaliya).” Guddoomiyaha UCID Eng. Faysal oo hadlakiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Innagana (Somaliland) waxa la innagu yidhi; ‘kaaliya shirkan waa la idinka faa’iidaysanayaa, idinkuna waad ka faa’iidaysan doontaane. Waxaan filayaa inay su’aalo ay Xukuumaddeennu tidhi noo soo caddeeya Ingiriiska inuu waday Safiirku. Markaa, arrintaasi loo soo caddeeyayna waxaan dawladda ka filaynaa in sidii ay ballan-qaadday wada tashi la isugu yimaaddo.”
“Midna waanu idiin cadeynaynaaye’e suuqa waxa la geliyay UCID waxay leedahay shirka hala tago anagu ha la tago ma aanu odhane’e waxaanu nidhi ha la wada tashado oo shirkaasi nuxurkiisa ha la ogaado. Mana rabno inuu shirkani noqdo mid inaga Somaliland inakala burburiya.”ayuu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Sidoo kale, Wasiirkii hore ee Hawlaha Guud Siciid Sulub Maxamed oo ka tirsan Xubnaha Garabka Waran-cadde ee Xisbiga UDUB , ayaa sheegay inay Safiir Ku-xigeenka Ingiriiska u sheegeen inaanay Somaliland wax dani ugu jirin ka qeyb galka shirka Soomaalida loogu qabanayo London. “Waxaannu u sheegnay mowqifka Xisbigayaga ee ku waajahan Shirkaasi, waxaanannu u sheegnay inaan shirkaas Somaliland wax dan ahi ugu jirin kana mid ahayn maamul-goboleedyada Galmudug, Puntland iyo kuwa la midka ah ee Koonfurta Soomaaliya ka jira.” Sidaa ayuu yidhi Siciid Sulub.
Previous articleDhalinyarada reer Sanaag ee ku dhaqan Hargeysa oo Casuumay Masuuliyiinta Urur-siyaasadeedka Wadani, muujiyey-na taageerada ay u hayaan
Next articleXoghayaha arrimaha dibedda ee dawladda Ingiriiska oo ka hadlay nuxurka kulan uu Muqdisho kula yeeshay Madaxda Soomaaliya